Porn တွင်သင့်ဦးနှောက် - porn စွဲကျော်လွှားရန်သိကောင်းစရာများ
အသစ်တစ်နှစ်နီးသည်, နှင့် nofap (NO porn - NO တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ) ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ဖို့နဲ့လာမယ့်တစ်နှစ်ကလူရဲ့ resolution ကိုအပေါ်ဖြစ်သင့်မယ့်နေသည်။ ထိုအခါငါပိုကောင်းတဲ့သင်တို့ခရီးကိုစတင် 1 ဇန်နဝါရီလများအတွက်စောင့်ဆိုင်းကြဘူးလို့ပြောလိမ့်မယ်, အခုစတင်ပါ, ယနေ့ကစတင်ပါ။
သငျသညျအကွံဉာဏျမကြိုက်ဘူးလျှင်ဤတွင်သင့်ရဲ့ nofap ခရီးကိုစတင်သင်ယောက်ျားတွေတချို့အကြံပေးချက်များဖြစ်ကြရုံ (သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘေးမှာ) ဒါကြောင့်လျစ်လျူရှု🙂
သငျသညျကို 'စနစ်ကဖိုင်တွေ "folder ထဲမှာစုဆောင်းခဲ့ကြသူအပေါင်းတို့ကို porn ကိုဖျက်မည်
သငျသညျမှတ်ပုံတင်ပြီဆို porn ဆိုက်များမှသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဖျက်ပစ်ပါနဲ့သူတို့အဖို့ဆက်လက်မရယူရန်လုပ်ရာတွင်သို့မဟုတ် filter များ အသုံးပြု. အားလုံး porn အီးမေးလ်များကိုပိတ်ပင်ရန်။
သငျသညျဤသို့ပြုတဲ့အခါသင်တက်အဆုံးသတ်ဘယ်နေရာမှာသင်သိ, ချစ်စရာ / ပူမိန်းကလေးများအဘို့အင်တာနက် / Facebook ကိုရယူရန်မရကြဘူး။
ပျင်းရိဖြစ်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။ PMO မှလွဲ. တစ်ခုခုလုပ်
အလွန်အကျွံအင်တာနက်သုံးပြီးရှောင်ကြဉ်ပါ, ဒါမှမဟုတ်တစ်လသို့မဟုတ်နှစ်ခုများအတွက်ပြည့်စုံချိုးယူနှငျ့သငျဖို့ရှိသည်သာအခါကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါဟာခက်ခဲအသံစခွေငျးငှါ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ #nofap ကြိုးစားမှုအတွက်မအောင်မြင်ဖြစ်ရပြီဆိုရင်။ ထိုအခါသင်ဤကြိုးစားကြတယ်ပါပြီ။ -exercise, ယလေ့ကျင့်ခန်းပင်ရုံ ups အကူအညီနဲ့တွန်း။ သင့်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုအပြုသဘောအရာများအတွက်သုံးပါ။ အိမ်သာကဆင်းဖျန်ဖြင့်ဖြုန်းတီးမနေပါနဲ့
ကျနော့်အမြင် porn blockers အတွက်ရည်ရွယ်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်အလုပ်လုပ်ကြပါဘူး။ သငျသညျ porn ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကရပ်တန့်နိုင်သည်ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမဆော့ဖျဝဲရှိသေး၏။ ဒါနဲ့ပဲကလစ်ပျောက် porn ဖြစ်ပါစေနဲ့မာနထောင်လွှားခံစားရကြောင်းပျောက်ရုံကလစ်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်မယ့်သူကကိုကြည့်မည်မဟုတ်သော်လည်းဆိုတဲ့အချက်ကိုကနေအာဏာကိုရယူဆိုတတ်ကြ၏။
'' Adblock Plus '' add-on firefox သို့မဟုတ် chrome, ကလုပ်ကွက်အဆိုပါပြဿနာကြော်ငြာအများဆုံးများအတွက်သုံးပါ။ ဒါ့အပြင်သင်ရုံရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက် add-on ကို အသုံးပြု. ကြောင်းက်ဘ်ဆိုက်ကနေဓာတ်ပုံတပုံရဲ့ / ကြော်ငြာတွေပိတ်ဆို့, porn အဘို့သင့်မတရားသောဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့်အချို့ကြော်ငြာတွေရှိသည်မှန်မှန်ဘယ် website မဆိုသွားရောက်ကြည့်ရှုလျှင်။
သင်သည်မည်သည့်ရုပ်ရှင်နှင့်ကာမဂုဏ် / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုကြည့်နေခဲ့လျှင်ထကြွလာချက်ချင်းရှေ့ကိုသူကငါ့ကိုရန်, ငါချက်ချင်းက skip ကိုဆိုလိုတာ။ သင်သည်မည်သည့်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုမတိုင်မီ imdb.com ရဲ့မိဘလမ်းညွှန် Read ပေမယ့် '' လိင်နှင့်ဗလာ '' သိပ်မြင့်မားတဲ့ rated လျှင်, ဖတ်နှောင့်အယှက်မပေးပါဘူး, ထိုလမ်းညွှန်သူ့ဟာသူအဖြစ်ပဲအခြားရုပ်ရှင်အဘို့အသွားတစ်ဦးမောင်းနိုင်ပါတယ်။ '' R 'rated ရုပ်ရှင်သငျသညျကိုသူတို့မပါဗလာရှိပါက, သင်ကရယ်စရာကိုရှာဖွေ, OK ကိုမရကြဘူးရှိပါသလဲ ကောင်းပြီဒါရုံဆိုဗလာမပါဘဲရုပ်ရှင်သွားသည်, R ကို rated ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာသှေးထှကျသံယိုလည်းပြဿနာဖြစ်ကြပေမယ့်သင်စွဲမဟုတ်ပါဘူး, သင်အမြိုးသမီးမြား၏အသားကိုမြင်လျှင်စွဲပါပဲ။ တစ်ဦးကရုပ်ရှင် PMO-အခမဲ့ဖြစ်ခြင်း၏သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ထက်ပိုမိုအရေးကြီးသောမဟုတ်ပါဘူး။ နှင့်အညီ, သင်ပြဇာတ်ရုံထဲမှာဆိုရင်ပဲသင်၏မျက်စိလွှဲ, သင်ထားတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူပြဇာတ်ရုံထဲမှာနေလျှင်အိမ်ပြန်သင့်ရဲ့မြည်းကိုရယူပါ။
သငျသညျ-ဆုံးရှုံး-i-လုပ်-you-FAP ။ သငျသညျအငျတာနကျပျေါမှာဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်ပြုဘာမှစဉ်းစားမနိုင်လျှင်ပေါ်တွင်သင်လှည့်နှင့်သင်အပေါ်ဖြစ်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်မတိုင်မီရုံကိုချွတ်ကြောင်းအရာကိုဖွင့် com
junk ကိုစား, junk ခံစားရတယ်, junk watch, junk ဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်။ ဒါဟာကိုယ့်ကြောင့်ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ကျန်းမာကိုစား, တစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ရှိတဲ့ Junk အစားအစာကိုခေါ်ပါတယ်။
ဒါဟာမဖြစ်, အယောက်ျားတွေအများစုသူတို့သည်ကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုရှိနိုင်ပါသည့် nofap အပေါ်ဖြစ်ကြသည်, သင့်စိတ်ထဲထဲကလိင်ရဖို့ကြိုးစားပါ? ငါ porn သင်သည်သင်၏မိန်းကလေးများအတွက် up ပြုလုပ်ရနိုင်မယ့်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ထိပ်တန်းအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ရမည်သင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းကိုခံစားရစေသည်ဘယ်လိုစဉ်းစားပါ။ လိင်သူတွေကိုအသက်တာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကြောင့် 24 /7နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်သိမ်းပိုက်ပါဘူး။
ငါသည်သင်တို့ကိုသင့်ရဲ့ခရီးအတွက်အားလုံးကိုအကောင်းဆုံးဆန္ဒရှိ, ငါကြီးမြတ်ဆုလာဘ်သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာ (နာလန်ထူ) မှာသင်ကစောင့်ဆိုင်းသောသင်ကတိပေး။
LINK - porn စွဲကျော်လွှားရန်သိကောင်းစရာများ